Ekhutshwa ngo-2008, i-movie "iDandies" nguValery Todorovsky yavuselela abantu abaninzi abaselula. Izambatho ezikhanyayo, umculo othakazelisayo wamavukeli aseSoviet phakathi kwekhulu leminyaka elidluleyo unikeza ithuba lokuthatha umtshato ohlukile kwindlela efanayo. Ukuba lo mncinci wagqiba ekubeni angene kwiintsuku ze "Style" kwaye aqhube umtshato kwisita esifanelekileyo, okokuqala, kuyimfuneko ukukwazisa zonke iindwendwe kwangaphambili. Kwaye kwenzeka ukuba iindwendwe zesizukulwana esidala ziya kuvuyisa ukujongana nokuphefumula i-emoyeni yeso sihlandlo, ngelixa abantu abatsha banokujamelana neengxaki xa bekhetha impahla efanelekileyo kunye nezixhobo.
Ukukhetha isitayela somtshato wesitayela, omncinci kufuneka athathe uhambelana nexesha lokugqoka. Iskimu sombala kufuneka siqwalasele, ngamanye amaxesha ndikhwaza. Ukuba unqwenela, ungagcina imibala yomtshato yendabuko: umhlophe kumtshakazi nomnyama kumyeni. Kodwa ukulungiswa kufuneka kuqinisekiswe ngelo xesha. Ingubo yomkhati womtshato ifanele ibe nobude obufanelekileyo (nje ngaphezu kwamadolo) kwaye lukhulu kakhulu. Ukufezekisa okugqibeleleyo kwisigqoko somtshato somtshakazi kwisitayela sokugxeka kuya kuba yesikhwama kunye nezicathulo ezinezithende ezinkulu zembala.
Ezinye iingxaki zinokuvela kunye neenwele zalo xesha. Kufanelekile ukukhumbula ukuba ngaloo mihla isigqubuthelo sasiwuphawu lwe-philistinism, apho ama-styleks alwa kakhulu. Iibhande ezinqamlekileyo ezinobunzima kunye neenwele eziphezulu, ezibekwe kwizinwele eziphakamileyo, kufuneka ziphathwe nge-lacquer, enesimo esiqinileyo.
Ngenyameko kuyimfuneko ukuza okanye ukuhamba kunye nokwenza. Ukwenziwa komsebenzi wesifazana kwesi sihlandlo kubonisa ukukhanya okubomvu, okukhethiweyo kunye neminwe ende ende. Iimpawu zidibene kunye nombala wengubo okanye izesekeli.
Iimfuno ezisisiseko kwendandatho yomyeni zincinci, iingubo ezincitshisiweyo zincinci, ibhatyi edibeneyo kunye nomtya omkhulu oqaqambileyo. Kufuneka ukhethe ngokucophelela ukhetho lwezihlangu. Akufanele idibaniswe ne-suit okanye ityhi. Le yinto ehlukeneyo, enezinto ezixhomekeke kuyo. Unokukhetha nokunciphisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okanye obomvu, kunye nezinebe ezinemibala enemibala. Ukudala ixesha elihambelanayo, inwele yendoda iya kufuna ubude obude bezinwele, kuba kukho i-coca ende kwifashoni. Ukuba kuyimfuneko, i-bangs kule nto inganyuswa.
Izivakashi, iholo kunye neeholide
Ngokuqhelekileyo, izambatho zeendwendwe mazigcinwe ngendlela efanayo. Zonke iingcebiso ezi ngasentla ziya kufaneleka kwiindwendwe. Amantombazana angakwazi ukuncedisa iingubo zabo ngeetronbhoni ze-satin zemibala egcweleyo, iimpuphu zeenwele kunye nezinye izinto eziqaqambileyo. Ngokuncedwa ipencil yangaphantsi kwamanzi ungayifaka kwizandla ze-pantyhose, ngokunjalo neenkonkcoko ezintle. Ulutsha luyakwazi ukuphuma kunye nomtya onomzekelo ongaqhelekanga.
Ubunzima obubalulekileyo bunokubangela ukhetho lweemoto, njengoko iimoto zangaphandle zangoku ziza kusondela. Imoto yabasandul 'ukutshata kufuneka ibe "i-Seagull" okanye "iVolga". Ukuhlobisa imoto akuyimfuneko, iibhaluni ezimbalwa nje emnyango.
Musa ukubeka umgudu omkhulu ekuhlobiseni iholo yokudla. Okwangoku, kukho iindawo ezininzi zokutya, ezo zangaphakathi ezigcinwa kwisitayela sesitayela. Umhlobiso oyintloko wemitshato yelo xesha yayimabhaloni, ngoko banokuyihobisa iindonga zehholo lokudla. Kodwa unganinzi.
Ngokuqinisekileyo, kumntu, umtshato wesitala uya kubonakala unzima kakhulu, kodwa umthendeleko owenziwe ngowokuqala uza kuqala ukuqala kwintsapho entsha. Emva koko, umxholo oyintloko wesitayela esicacileyo ngumbala oqaqambileyo, uvakalelwa kakuhle kunye nolwandle oluhle.
Indlela yokucoca iindlebe nge-hydrogen peroxide?
Dietary shish kebab